Agroindustrial yakaoma "Belorechensky" (SSK "Uralsky mbatatisi") - Magazini "Potato Sisitimu"
Agroindustrial yakaoma "Belorechensky" (SSK "Uralsky mbatatisi")
Muna 2017, iyo Uralsky Potato Mbeu Inoberekera Kambani yakavambwa muSverdlovsk Dunhu. Ivo vatori vechikamu mukuumbwa kwekambani vaive AO APK "Belorechensky" uye Ural Research Institute yeZvekurima Parizvino, ndeimwe yemabhizimusi makuru muRussia yekugadzira uye kuongororwa kwezvirwere zvevakuru vembewu mbatatisi. Imwe yezvinangwa zvekutanga zvehwaro hwayo kugadzirwa kwenzvimbo yemazuva ano yekudyara uye yekudyara mbeu yekugadzira nekutengesa yemhando yepamusoro mbatatari mbeu padanho reindasitiri, iine huwandu hwegore hwekutengesa huwandu hwematani zviuru gumi zvemhando yepamusoro.
Kubva 2018, chirongwa cheUral Potato chakagamuchira chinzvimbo chemubatanidzwa. Inozivikanwa seyakakosha zvine hungwaru kuchengetedza nyika kuchengetedza chikafu uye yakaverengerwa muchirongwa chehurumende kutsigira kurimwa kwembatatisi yeRussia.
Panyaya yemidziyo nemidziyo, Uralsky Potato ndiyo imwe yenzvimbo dzazvino uno. Iyo Mbatatari Yekudyara Micropropagation Laboratory inokwanisa kugadzira zvinopfuura zana nemazana mashanu emavitro zvirimwa pagore. Iyi tekinoroji yakakosha kana microplants yakasimwa kubva kune yakachena maseru zvinhu zvakatorwa kubva kubhangi remhando dzakasiyana dzembatatisi pasi pemamiriro asina kuchena, aine akakwana parameter yetembiricha, mwenje uye mwando. Maitiro ega ega kune akasiyana siyana uye edu marabhoritari ekuongorora zvirwere zvembatatisi tichishandisa chaiyo-nguva PCR ongororo inotibvumidza isu kuwana mhando yepamusoro yembeu.
Iyo greenhouse yakaoma, inoumbwa nedzimba dzekuchengetedza gumi nemasere, zvinoita kuti pagore ibudise zvinopfuura 8 mbatatari minitubers, iyo, mushure menguva yakarara, inodyarwa munzvimbo dzakasarudzika kuwana yekutanga munda chizvarwa che tubers. Chikamu chega chega cheiyo yekutanga uye yakasarudzika mhodzi yekugadzira mbeu muUralsky Potato iri pasi pekutonga kwakasimba kweRosselkhoztsentr uye inoperekedzwa nePCR kuongorora kuti uone hutachiona hwakavanzika hwehutachiona uye hutachiona.
Parizvino, OOO SSK Uralsky Potato ndiye muridzi wemhando mbiri dzinovimbisa yesarudzo yeUral: Terra (mangwanani-ngwanani, yekushandisa tafura) neAlaska (yepakati-mwaka, yekushandisa tafura). Kubva muna 2023, chimwe nechimwe chazvo chichatengeswa muhuwandu hwematani zana muchikamu chevakuru.
Mhando dzakasiyana dzakabatanidzwa muchirongwa cheFNTP che2017-2025. Sekureva kwechirevo cheHurumende yeRussian Federation yaFebruary 15.02.2017, 76 Nha. 10, kugadzirwa kwemhando dzakasarudzika dzemhando dzakadai dzinotsigirwa kubva mubhajeti remubatanidzwa. Kambani iyi ine mhando dzinodarika gumi dzinovimbisa uye dzakakurumbira dzemhuri, kusanganisira Ural, nekudyara kwekunze munzira dzakasiyana dzekushandisa pamatanho akasiyana ekuberekana. Pakati pemhando dzakasiyana dzakaburitswa nebhizinesi, munhu anogona kucherechedza mhando dzakadai seAlaska, Terra (kusarudzwa kweUral Research Institute of Agriculture), Gulliver (kusarudzwa kweFederal Research Center of Potato yakatumidzwa zita raAg Lorkh), Samba (kusarudzwa kweTATNIISH ), Innovator (kusarudzwa HZPC Holland BV) nevamwe.Sangano iri riri kushingairira kusimudzira marudzi epamba nekuwedzera kugona kwavo munzvimbo.
Chikwata chekambani chine chaicho nyanzvi mune chirimwa chirimwa nekurima, kusanganisira masters, postgraduates, vavhoterwa vekurima sainzi. Vese vane simba, vaneshungu, vanogara vachikura uye vane hunyanzvi vashandi.
Pamwe pamwe nekugadzira, Uralsky Potato, mukubatana pamwe neUral Agrarian University, inoshingairira kuita tsvagiridzo mumunda we micropropagation, kuongororwa kwezvirwere uye agroengineering tekinoroji yekugadzira mbatatisi. Mhedzisiro yekutsvaga yakaburitswa mune anotungamira ejenali esayenzi.
Kwemakore matatu ebasa rinoshanda reiyo inomera-yekukura mbeu, zvaive zvichikwanisika kuzadzisa zvese zvinangwa zvakatemwa panguva ino. Muna 2020, kunyangwe zvikaoma mamiriro ekunze-mamiriro ekunze uye zvipingamupinyi zvine chekuita nedenda, nyanzvi dzakakura zvinopfuura mazana mashanu nemakumi matanhatu emaminetsi, dzakaburitsa nekuchengetedza matani mazana maviri embeu dze "yekutanga munda chizvarwa" uye 560000 matani embeu dze "super-super -elite "chikamu. Mushure mekusvika padanho rekugadzira muna 200, bhizinesi rinoburitsa zviuru gumi zvematani embeu dzembatatisi pagore, izvo zvinosangana nezvinodiwa kwete kwete chete Urals Dunhu, asi nedzimwe nzvimbo dzenyika.
Source: zvichibva pazvinhu kubva mubhuku rePotato Union
Tags: "Ural mbatatisi"APK "Belorechensky"gadzira mbatatisi